Hay’adaha duulista hawada Afrika oo Kenya ku shiray - Halbeeg News
Hay’adaha duulista hawada Afrika oo Kenya ku shiray
MOMBASA (HALBEEG)- Hay’adaha duulista hawada Afrika ayaa soo jeediyay in maalgelin ballaaran lagu sameeyo horumarinta duulimaadyada Afrika taas oo saamixi karta in duuliyayaasha wada diyaaradaha ay wada shaqeyno iyo xiriiro la sameyn karaan dhammaan xarumaha Isgaarsiinta ee dhulka ku yaalla.
Hadalkan ayay Hay’adaha Duulista Afrika kaga dhawaaqeen magaalada Mombasa halkaasi oo dhowaan lagu soo gabagabeeyay shirka Ururka Shirkadaha Duulimaadyada Afrika.
Shirka ayaa looga dhawaaqay in la horumariyo wada shaqeynta shirkada Hay;adaha Duulista Hawada Afrika.
Guddoomiyaha Ururka Hay’adaha Duulista Hawada Afrika Ahna maareeyaha guud ee waaxda duulista hawada ee Tanzaniya Xamza Jowhari ayaa sheegay in shirkadaha qaar ay ka halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen qalab casri si ay hagaajiyaan duulimaadyada ay sameeyaan.
Hay’adaha Duulista Afrika ayaa ka dhawaajiyay in lacagaha ay diyaaradaha ku bixiyaan iibsashada qalabka ay u baahan yihiin uusan ku filneyn in ay gaaraan heerarka caalamiga ah ee u dagsan diyaaradaha aduunka.
Madaxda Hay’adaha Duulista Hawada Afrika ayaa sheegay in maalgelin lagu sameeyaa shirkadaha diyaaradaha ay horumarin karto garoomada diyaaradaha Afrika wax ayna sidoo kale yareyneysaa khatarta imaan karta in lagu jiro duulimaadyada.